Xog dheeriya oo laga helaayo Shabaab oo gaari Qaad siday ku gubay Sh/ Hoose?
13 June, 2018 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose, Shabaab ayaa xalay fiidkii waxa ay gaari Qaad siday ku gubeen deegaanka Batra-miin oo u dhaxeeya Golweyn iyo Buula-mareer oo ka tirsangobolkaasi.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in xalay fiidkii ay mar qura ka war heleen gaari halkaasi ku gubanaya, iyo dad dalbanayay gargaar.
Wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka imaanaya ayaa sheegaya in falkaasi ay ku geeryoodeen ilaa Afar qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa gaariga, una rarnaa Qaadka oo markii laga keenay Buula-mareer, loona waday Shaleembood.
Masuuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan Guddoomiye kuxigeenka dhinaca ammaanka iyo siyaasadda gobolkaasi C/fataax Xaaji ayaa sheegay in hada aysan ka hadli karin dhacdadaasi, balse ay wadaan baaritaan iyo dabagal.
Gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka mid yahay gobolada ugu colaada badan dalka, waxaa isku heysta oo isku horfadhiya Ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo Al-shabaab, sidoo kale gobolka mararka qaar waxaa ka dhaca dagaal beeleedyo.
Qarax Ka Dhacay Gobolka Sh/Hoose,Saraakiil Gaari Ay La Socdeen Miino La Kacday
the background of the new autonomy president Visits: 667123
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 42404
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 38110
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 33166
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 28034
Elezioni europee, sondaggi: volano i sovranisti di Salvini, niente maggioranza Ppe-Pse Visits: 31
Graham vows probe after McCabe interview on Trump Visits: 51
Ethiopia oo Wiil Adeer Uyahay Xildhibaan Ibraahim Yerow Baydhabo Ku Dishey Visits: 84
Kenya oo Sharuudo Ku xirtay Soomaaliya Visits: 13
Shabaab oo sheegatay Masuuliyada dil saakay Afgooye Visits: 20